शौक, तालिका खेल
Gata Kamsky - विश्व चेस कुलीन को जीवित लिजेन्ड। उहाँले coveted मुकुट FIDE प्राप्त गर्न सकेनौं भन्ने तथ्यलाई बावजुद, एक क्यारियर को हाइट्स बाटो मा Kamsky सम्मान र उपलब्धिहरू एक नम्बर कमाएका, र तिनीहरूलाई को भन्दा जवान थिए। ELO दर्जा पनि आफ्नो उपलब्धिहरू तल खेल्न संभावना दिन छैन। Kama प्रतिभा संयुक्त राज्य अमेरिका मा, एक बेला पछि सोभियत संघ को सबै गणराज्यहरु मा पहिचान र थियो।
Gata Kamsky: जीवनी
को तातार परिवार मा जुन 2, 1974 आज सबैभन्दा शानदार खेलाडी को एक जन्म भएको थियो। Novokuznetsk शहर - अब यो Kama, र आफ्नो जन्म ठाउ को नाम अन्तर्गत सबै चिनिएको छ। त्यसपछि कुनै एक केटा त आफ्नो दौड महिमा थियो भनी थाह थियो। जन्म, बच्चालाई नाम Gataulla Rustemovich Sabirov दिइएको थियो। रूपमा प्रारम्भिक दुई वर्ष केटा रूपमा खुला पढ्न र चार पियानो महारत छ - यो आफ्नो उच्च मानसिक क्षमता एक प्रारम्भिक उमेर मा प्रकट कि टिप्पण लायक छ। तर एक को प्रतिभा उहाँले पहिलो चेस खेल्न प्रयास गर्दा क्षण मा साँच्चै प्रकट गर्नुभयो।
Novokuznetsk शहर छोडेर पछि, आफ्नो परिवार छोटकरीमा उहाँले चेस कला जवान प्रतिभा बुझ्न थाल्यो जहाँ कजान, मा बसे। केही समय पछि, तिनीहरूले Leningrad सारियो। उहाँले केटाहरु दुई वर्ष पुरानो अध्ययन किनभने एक स्थानीय स्कूलमा अध्ययन, दिइएको थियो gat सजिलो छैन। यो तिनलाई पहिले नै त्यो समय थियो कि आफ्नो उमेर को लागि एक धेरै ठोस स्थिति थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद केटा राम्रो-natured स्वभाव थियो र धेरै सजिलो आफ्नो साथीहरूको कुराकानी गर्न थियो, आदर र भरोसा सम्बन्ध स्कूलका साथीहरू जीत, रोक्न थिएन। Kamskiy Gata उपनाम Rustemovich Sabirov Tatarstan को नाटक थिएटर को मूल उभिरहेका थिए जो आफ्नो हजुरबुबा देखि लियो। उहाँले पहिलो Neva मा शहर मा कि नाम प्रसिद्ध भए।
म "सानो grandmaster" व्लादिमीर Zak सुरु रूपमा?
एक पेशेवर क्यारियर Gata Kamsky को शुरुवात दिग्गज कोच व्लादिमीर Zak को अग्रगामी को महल मा प्रशिक्षित गरिएको थियो। व्लादिमीर Shishkin - निरंतर प्रशिक्षण उहाँले बलियो खेलाडी को एक साथ खेल सयौं बिताए। जवान चेस खेलाडी को प्रतिभा कि व्लादिमीर Zak पहिलो श्रेणी देखि अकेला भनिन्छ त स्पष्ट थियो "मेरो सानो महान् मास्टर।" पछि बाहिर गरिएका रूपमा उहाँले बिल्कुल सही थियो। Gata Kamsky - जुनियर चेस खेलाडी बिस्तारै र सबै नयाँ हाइट्स जित्न निश्चित छ। उसले, "स्पार्टाकस" च्याम्पियनशिप को युवा जित्यो त्यसपछि उहाँलाई केटाहरू पहिले नै उमेर 12 वर्ष बीच सोभियत संघ को च्याम्पियन को शीर्षक दिइएको छ कि Markom Taymanovym माथि शानदार विजय जित्यो। यस तथ्यलाई एकदम मा एक Elo दर्जा भविष्यमा असर।
त्यतिबेलादेखि नाम विशाल देश विभिन्न भागमा Kama थियो। समाचार पत्र अक्सर Kasparov, त्यो सामान्य सार्वजनिक गरिएको यस्तो बलियो छाप उहाँलाई तुलना। तर, यो अब लिनु होइन। केही समय पछि, सोभियत चेस संघ को auspices अन्तर्गत प्रसिद्ध मिलान Kamsky र Alekseya Shirova होस्ट।
किनभने Prodigy प्रतिद्वन्द्वीको धेरै अनुभवी थियो मिलान, धेरै तातो र लामो थियो, तर Gata Kamsky Gennady Nesis को नेतृत्व अन्तर्गत विरोध भरोसा जित्यो। यो विजय बाटो उहाँले सोभियत संघ प्रतिनिधित्व जसमा जुनियर विश्व च्याम्पियनशिप मा एक चेस खेलाडी, खुलेको छ।
अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका जाने
संसारको चरण मा एक शानदार विजय पछि Kamsky र तिनको परिवार करोडपति जेम्स केन, इन्कार गर्न सकेन जो देखि एउटा प्रस्ताव प्राप्त गरेका छौं। 1989 मा, अचानक सोभियत functionaries, तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका मा बस्न उत्प्रेरित। तर, यो को प्रतिभा कुनै प्रभाव थियो , ठूलो चेस खेलाडी विपरीत, फेरि Gata Kamsky अमेरिकी ओपन विजेता, व्यावसायिकता को हाइट्स पुग्न सक्षम थियो। महान् मास्टर को नयाँ शीर्षक, त्यो interzonal प्रतियोगिताको मा सबै भन्दा राम्रो र पास चयन को सबै भन्दा राम्रो हुन्छ। के निम्नानुसार कुनै कम उल्लेखनीय विजय छ: 1990 मा, Gata Kamsky सुपर प्रतियोगिताको टिलबर्ग मा, विश्व चेस कुलीन बीच उहाँलाई सम्मान को ठाउँ कमाउन जित्यो।
यी घटनाहरू पछि Ghats क्यारियर कुनै कम महत्वपूर्ण लामो थियो। निस्सन्देह अर्को प्रतियोगिता अघि धेरै विशेषज्ञहरु Kama मा भरोसा। 1993 मा चेस संसारको विभाजित को समयमा, ऊ फेरि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रिय टीम को भाग प्ले जित्यो। Kamsky र बलियो रूसी चेस खेलाडी व्लादिमीर Kramnik - त्यसपछि विश्व टोली च्याम्पियनशिप मा दुई दन्त्यकथा को एक बैठक भएको थियो। अर्को विजय कार्यकारी Najdorf स्मारक छापिएको उम्मेदवार मा Kama प्रत्यक्ष बाटो FIDE र पीसीए लागि मेल खाने।
क्यारियर शिखर: Kamsky उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धाहरू पराजित
क्वालिफाइङ चरण पीसीए हार समाप्त व्लादिमीर Kramnik 1.5 र निगेल कम 5.5: 1.5, त्यतिबेला पुरस्कार को लागि एक हाल दावेदार थियो जो 4.5। यो क्वालिफाइङ राउन्ड मा संग्रामहरू जीतेको एक श्रृंखला पछि, उहाँले संग मिलान परित्याग गर्ने निर्णय गरे कि तार्किक छ Kasparov चेस खेलाडी Viswanathan आनंद।
सहभागिता FIDE प्रतियोगिताहरु मा धेरै उज्जवल थियो। र Valeriey Salovoy (4.5: 1.5): Kama भ्यान der Sterrenom (2.5 4.5) संग unbeaten लडाई रह्यो। एउटै नतिजा अपेक्षा र आनंद, जो दिग्गज चेस tiebreaker संग लडे।
विश्व च्याम्पियनसिप मा परिणाम Ghats आधारित Linares मा विशेष विजय (1994) मा, सबै एकैचोटि हामी जीएम समय मा अनातोली Karpov गर्न belonged जो च्याम्पियनशिप शीर्षक, प्रतिबद्ध छ भनेर बुझे।
दिग्गज चेस राजा को शीर्षक लागि युद्धमा मा हार
केही वर्षपछि, 1996 मा, यो मुकुट FIDE लागि प्रतियोगिता आयोजित। एलिस्ता - लडाई लागि स्थल Kalmykia को सबै भन्दा ठूलो सहर थियो। घटना एक श्रृंखला संग मुकुट लागि मिल्ने भयो। दिइएको तेजी समय कम्प्यूटरीकरण, Karpov, मा विकसित वृद्ध छ, ठंडे बस्ते संग खेल हासिल गरेको छ। पिता र आयोजक बीच Kama नकआउट Gata पछि पनि सेकेन्ड लड्न नेतृत्व जो गम्भीर द्वन्द्व भङ्ग। यो व्यवहार Ghats बुबा कारण बहुमूल्य जानकारी स्थानान्तरण गरेर राहत शिविरमा Karpov मा आधारहीन शङ्काको थियो। म्याच बस3अंक को एक ढिलाइ संग Kama को हार संग समाप्त भयो। निराश बुबा refereeing को अविश्वास देखाए र मुकुट पूर्ण अन्याय हो बिना जवान bidder बाँकी बताए। अब, आफ्नो बुबाको निर्देशन अनुसार, Gata Kamsky चेस अन्त्य र विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययन सुरु भएको थियो।
पार्थक्य र भाग्य
धेरै वर्ष को लागि, यो Kama नाम सम्बन्धित कुनै पनि समाचार देखिँदैन। लगभग 10 वर्ष चेस खेलाडी सार्वजनिक देखाउनका थिएन। यो अवधिमा उहाँले कलेज बाट व्यवस्था डिग्री कमाउन, रासायनिक र सैन्य चिकित्सा अकादमी मा एक डिग्री संग स्नातक गर्न व्यवस्थित। कि पछि Kamsky एक वकील बन्न इरादा, आफ्नै कम्पनी खोलेको छ। दस वर्ष मा, त्यो विवाह र सुखी पारिवारिक जीवन भएका थिए।
Kama घट्दैछ छोटो समयको लागि अवरोध भएको थियो: उहाँले 1999 मा नकआउट FIDE दुनिया च्याम्पियनशिप को सुरु मा एक पुरस्कार लिन प्रयास केवल एक समय, टूर्नामेंट को प्रारम्भिक चरणमा पहिले नै कहाँ विजेता Aleksandru Halifmanu गर्न गुमाए। यो बावजुद इच्छा पूर्ण निभाउँछ र उहाँले आफ्नो विजयोल्लास फिर्ती गरे जब 2004 मा resurfaced छैन Ghats। विश्वविद्यालय एरिजोना को एक व्यवस्था डिग्री प्राप्त गरेपछि, Kamsky राम्ररी आवेदकहरुलाई आफ्नो बाटो पुनः खोलिएको जो विश्व खन्टी-म्यानसियस्क मा कप (2005), को विजय लागि तयार गर्न सक्षम थियो। एलिस्ता मा नयाँ जोस फिर्ता, उहाँले Etena Bakro 3.5 को एक क्रशिंग स्कोर संग जित्छ: 0.5। तर बोरिस संग संसार शीर्षक लडाई गर्न दुर्गम अवरोध गर्ने अझै पनि एक प्रतिभाशाली चेस खेलाडी रोक्न व्यवस्थित Galfandom, बन्दछ।
चेस को कथा को फिर्ती
पाउन अमूल्य अनुभव, Kamsky अर्को विश्व कप मा आफ्नो क्यारियर शिखर पुगेको छ। अमेरिकी महान् फिर्ती Adly, Avrukh, Georkieva, Svidler, Ponomariov, Shirov र Carles लागि हार मा समाप्त भयो। संग्रामहरू जीतेको यो श्रृंखला उसलाई पदक ल्याउन। अर्को हार र एक परिणाम, आनंद संग चाहेको मिलान को impossibility रूपमा नेतृत्व जो Veselin Topalov, - यसबाहेक, उहाँले फेरि बलियो चेस संसारमा खेलाडी संग सामना गर्नुपरेको थियो।
Grandmasters आज चेस
2011 मा फेरि भाग उम्मेदवार खेलहरूमा, Topalov को बदला लिने, तर फेरि हार मा समाप्त Gelfand विरुद्ध यो खेलमा निम्न लिए। क्षणमा उहाँले धेरै अमेरिकी च्याम्पियन शीर्षक को मालिक, पहिलो परिमाण को खुला-प्रतियोगिताहरू को एक नम्बर को विजेता हो र कांस्य medalist बारम्बार। उसलाई पछि, "Linex-जादू" को एक भाग रूपमा युरोपेली प्रतियोगिता तीन पटक सम्पत्तिको, "यूराल" र "SOCAR"।
Kama हालै रूस सारियो। अब उहाँले स्थापित कि कजान चेस स्कूल निर्देशन। घटना रूपमा उहाँले कजान "किश्ती" को क्लब च्याम्पियनसिप भाग छनौट गरे।
बोर्ड खेल एक पक्ष के चयन?
चेस खेलाडी Karyakin Sergey: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, आमाबाबु, फोटो, उचाइ
कति बैकगैमन मा चिप्स। खेलको नियम मा मतभेद
कसरी सही अंग्रेजी शब्द उच्चारण गर्न?
र कसरी के गिलास प्राइमर धुन?
Backpacks Tatonka - यो सजिलो र कार्यक्षमता को एक नमूना